ANYỊ GA-EKPOCHAPỤ NGWA AHỊA ADIGBOROJA-SON – hoo!haa!!
Kaduna: Onye Nlekọta ukwu ụlọọrụ Standards Organization of Nigeria (SON) n’ala anyị bụ Mazị Osita Aboloma ekwudola hoo!haa! na ụlọ ọrụ ya agaghị ezuike ruo na ha ekpochapụ ngwaahịa adigboroja na Naijiria, ma rịọkwaa nkwado ndị nile nkea gbasara iji wee mezuo ebumnuche ha nkea.
O kwuru nkea taa bụ abalị atọ nke ọnwa Julayị na Kaduna n’Ọgbakọ otu ụbọchị nke ebumnobi ya bụ Njikọta aka ọnụ nke ọ gbasara iji chụlaa ngwa ahịa adigboroja.
Ọ kọwara na ụlọ ọrụ ya na-agba mbọ ime nkea site n’usoro dị iche iche dịka MANCAP, SONCAP nakwa akara nri ama a na-amadogasị na ngwaahịa iji mee ka ọhaneze mara ihe dị iche n’égbé n’ègbè.
Onye nochitere anya ya na ya bụ mmemme ma bụrụkwa onye nlekọta SON na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ nke Mgbago Ugwu (North West) bụ Alahaji Abubakar Abba (Galajen Bauchi), dọrọ ụmụ amaala Naijiria aka ná ntị banyere ọdachi na-adị na ịzụ ngwaahịa adigboroja.
Na nkụzi o nyere, Ichie Increase Uche, onye isi otu National Association of Government Approved Freight Forwarders (NAGAFF) na Naijiria sịrị na mgbasa ozi a maka ngwaahịa adigboroja kwesịrị ị na-adị kwa mgbe kwa mgbe n’ihi oke uru ọ bara.
Ichie Uche sịkwa na ọ dị mkpa na ndị SON ga – anọ n’ọdụ ụgbọ mmiri.
Previous Post: MMỌNWỤ, Ọ GỊNỊZỊ?
Next Post: ỌGBAGHARA, GBAJABIAMILA ZỌRỌ ONWE YA AZỌ TAA